नवजात शिशुले किन फेर्छन छिटो–छिटो सास ? | Radio Republic 88.2 MHz
Home जीवनशैली/स्वास्थ्य नवजात शिशुले किन फेर्छन छिटो–छिटो सास ?
नवजात शिशुले किन फेर्छन छिटो–छिटो सास ?
on: November 06, 2018 In: जीवनशैली/स्वास्थ्यNo Comments
के तपाईँको बच्चाले छिटो–छिटो सास फेर्छ ? पक्कै फेर्छ ! यस्तो देख्दा तपाईँको मनमा कयौं प्रश्नहरु जन्मिरहेका होलान ? कहिले काँही त थोरै डरजस्तो पनि लाग्दो हो । तपाईँलाई यस्तो हुनु पनि स्वभाविक नै हो ।
नवजात शिशुको स्याहारसुसार गर्नु चुनौतीपूर्ण नै छ । पहिलो पटक तपाईँ आमाबाबु बनेको बेला त यो झनै कष्टपूर्ण हुन्छ । बच्चाका कतिपय व्यवहारले आमाबाबु के भयो होला भनेर आत्तिन्छन् पनि । बच्चाले फेर्ने स्वासलाई लिएर कतिपय आमाबाबु अलिक डराएका पनि हुन्छन् । हुनत बच्चाले फेर्ने स्वासलाई चलाखीपूर्वक हुर्नु पनि पर्दछ । बास्तवमा नवजात शिशुले सास लिने तरिका ठूला बच्चा र वयस्क भन्दा नितान्त अलग हुन्छ।
कारण के हो ?
बास्तवमा नवजात शिशुको फोक्सो सानो हुन्छ । फोक्सोको आकार सानो भएकाले उनीहरुको स्वासप्रस्वासको दर पनि उच्च हुन जान्छ । बच्चा जब विस्तारै ठूलो हुँदै जान्छ तब उसको फोक्सोको आकार पनि ठूलो हुन थाल्छ अनि स्वास लिने क्षमतामा पनि विकास हुन्छ । त्यसपछि छिटो–छिटो स्वास लिने तरिका पनि बदलिँदै जान्छ ।
के हो सामान्य अवस्था ?
शिशुहरु ६ महिनाको हुँदासम्म उनीहरुको स्वासप्रस्वासको दर ३०–६० बीपीएम (प्रतिमिनेट) हुन्छ । जब बच्चा ६ महिनाभन्दा ठूलो हुन्छ यो दर २४ देखि ४० बीपीएमको आसपास पुग्छ । १ देखि ५ बर्षसम्म बच्चाहरुको स्वासप्रस्वासको दर २० देखि ३० पटकको हुन्छ । ६ बर्षको बच्चाले एक मिनेटमा १२ देखि २० पटकसम्म स्वास फेर्छन । किशोरावस्थामा यो दर १२ देखि १६ प्रतिमिनेट हुन आउँछ ।
कसरी गन्ने ?
यसको लागि एक मिनेटमा बच्चाको छाती कति पटक उठ्छ त्यसको ख्याल गर्नुहोस । यदि यसरी पत्ता लगाउन तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ भने बच्चाको छातीमा हल्कासँग हात राख्नुहोस यसो गर्दा उसको छाती कतिपट्क उठ्छ तपाईलाई थाहा हुने छ ।
रुपन्देहीमा ६ जना जुवाडे पक्राउ , २ लाखभन्दा बढीको पटका बरामद
अफिसबाट घर फर्केपछि के गर्ने ?
यसकारण हुन्छ कम उमेरमै स्मरणशक्ति ह्रास
अखिर कुन कुन समयमा चिया पिउन हुँदैन ?
एक्सरे र सिटीस्क्यान पटक पटक नगर्न बीज्ञको सल्लाह:क्यान्सरदेखि बंशाणुगत समस्या हुन सक्छ